Xagay ku dambeeyeen ciyaartoydii lagu waayay tartanka Barwaaqo Sooranka – SHABAKADA HIIRAAN XOG
HomeWararka SoomaaliaXagay ku dambeeyeen ciyaartoydii lagu waayay tartanka Barwaaqo Sooranka
Hiiraan Xog, May 18, 2018:- Bil ka badan ayaa laga joogaa tan iyo markii ciyaartoy badan lagu waayay ciyaarihii Barwaaqo Sooranka ee Australia lagu qabtay.
Kuwii u horreeyay ee la waayay waxay ahaayeen siddeed ka ruux oo mid ahaa kooxdii ka socotay Cameroon. Sikastaba ha ahaatee waxaa hadda la qiyaasayaa in la la’yahay 20 ilaa 100.
Waxaa ka mid ah ciyaartoy, tababareyaal iyo masuuliyiinta dalal Afrikaan ah matalayay.
Maadaama uu dal ku galkoodii ku ekaa Talaadadii laga soo gudbay, Australia ayaa ku goodiday in ay masaafurin doonto kuwa sida sharcidarrada ah ku sii jooga.
Sikastaba ha ahaatee waxaa la ogol yahay in ay dalka sii joogaan haddii ay isku dayaan in ay magangalyo waydiistaan.
Imisa ruux ayaa la’layahay?
Warbaahinta Australia ayaa isku dayay in ay dabo galaan dadka la’layahay.
Waxay soo xigteen xarumo la taliya qaxootiga iyo qareennada waaxda socdaalka oo sheegay in taradu ay u dhaxayn karto 20 ilaa 50.
Warbaahinta dawladda Australia ee ABC ayaa sheegtay in ay ilo ka heleen in ay dalka ku sugan yihiin 100 ruux.
Jimcihii ayay dawladdu diiday in ay shaaciso tirada dadka magangalyada soo dalbaday. Waxayna sheegtay in aysan xaqiijinin tirada rasmiga ah ee dadka la’layahay.
Xagee laga yaabaa in ay ku sugan yihiin?
Qawaaniinta caalmiga ah waxay qabaan in dadku ay xaq u leeyihiin in ay dal kale magangalyo waydiistaan haddii ay ka baqaan in dalkooda ay dhibaato kala kulmaan.
Qareennada arrimaha qaxootiga ku takhasusay ee ku kala sugan Sydney, Melbourne iyo Canberra ayaa warbaahinta u sheegay in ay la soo xiriireen qaar ka mid ah ciyaartoyda la la’yahay ayna ka codsadeen in ay ka caawiyaan sidii dal ku galka loogu cusboonaysiin lahaa.
Mid ka mid ah qareennada ku sugan magaalada Canberra ayaa warbahinta Fairfax Media u sheegay in uu la shaqaynayo shan ciyaartoy oo magangalyo raba.
Masuuliyiinta laanta socdaalka ayaa waax gooni ah u saaray kuwa aan wali la soo xiriirin si ay gacanta ugu soo dhigaan.
Xeeladaha laga yaabo in ay isticmaali doonaanna waxaa ka mid ah baraha bulshadu ku xiriirto.
Fotsala Simplice oo ah feedhyahan Cameroon u dhashay ayaa bishii hore Facebook soo galiyay sawirro muujinaya isaga oo ku dalxiisaya Melbourne, laakiin markaas dal ku galkiisa ayaa wali sii shaqaynayay.
Kama uusan jawaabin codsiyo ay BBC-du u sii marisay Facebook.
Siday arrintaasi u dhici kartaa?
Ciyaartoy tiro badan oo la waayo ayaa caado ka noqday tartamada ciyaaraha ee caalamka ka dhaca. Waxaa loo malaynayaa in qaar badan oo ka mid ah dadka la waayo ay raadinayaan nolol wanaagsan.
Markii uu socday Olmbiggii London lagu qabtay 2012kii waxaa la waayay 21 ruux oo isugu jiray ciyaartoy iyo tababareyaal, qaar badan oo ka mid ahna ilaa iyo hadda lama oga meesha ay jaan iyo cirib dhigeen. In kabdan 80 kalana magangalyo ayay wcodsadeen wakhtigaas.
Sidan oo kalana waxay dhacday 2006dii markii ay Australia martigalisay ciyaaraha Barwaaqo sooranka, 40 ruux oo ciyaartoy iyo masuuliyiin isugu jira ayaa sii joogay iyadoo ay ka dhacday dal ku galkii magangalyo ayayna codsadeen.
BBC-da ayaa la hadashay toddobaadkan Simplice Ribouem oo ah ciyartay hore oo Cameroon u dhashay wuxuuna sheegay in haddii uu laabto uusan dalkiisa ku nabad galeen
Waxaa lasiiyay magangalyo intaas wixii ka dambeeyay Australia ayuu ciyaaraha ku matali jiray.
Australia ayaa dal ku gal qaxootinimo ah siisay 22,000 sannadkii hore, in kabadan 1,200 oo ka mid ah dadkaasna waxay ka yimaadeen dalal Afrikaan ah.